किन बोलाए प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक ? यस्तो छ सम्भावित एजेण्डा – Janadesh Daily | ePaper
किन बोलाए प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक ? यस्तो छ सम्भावित एजेण्डा
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दिउँसो ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध नारावाजी लगाउदै बैठक अबरुद्ध गरेको विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ ।
सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्ने प्रतिपक्ष एमालेले सभामुख विरुद्ध गरेको नारावाजी र संसद अवरोधको विषयमा छलफल गरेर पहल गर्ने स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने जनाएको छ । सरकारमा पार्टीको तर्फबाट २ जनामात्रै मन्त्री सहभागी भएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेटको विषयमा समेत स्थायी समिति सदस्यलाइ जानकारी गराउने तयारी छ ।